Fametahana metaly vita amin'ny vy amin'ny induction | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Fanamafisam-peo Metal Stamp miaraka amin'ny induction
tanjona: Induction Heating Ny mifanohitra amin'ny endriky ny metaly iray ka ny holatra dia ho solon'ny rantsana / diviziona rehefa voan'ny hamonoana.
Ny fitaovana S-7 amin'ny varim-pandrosoana isan-karazany
fitaovana DW-UHF-10KW, rafitra fanamorana ny induction, izay misy amina toby fivoahana hafanana iray ahitana kapazaka roa 1.5 μF ho an'ny totalin'ny 0.75 μF sy ny famolahana kofehy fanindronana telo samihafa natokana ho an'ny fampiharana.
Fomba fiasa Iray coil helical dimy ary roa-efatra dia ampiasaina mba hanafanana ny faran'ny hajia amin'ny mari-pana ilaina. Ny haben'ny ampahany roa dia azo atao ao anaty coil tsirairay, amin'ny alàlan'ny fametrahana milina mitovy ihany afa-tsy amin'ny fotoana tsingerina. Ny tahan'ny tsingerina dia miankina amin'ny haben'ny fiampitana. Ny habe toradroa 3/8 ″ (0.9525 cm) dia manana tahan'ny ambany 10 segondra. Ny tahan'ny haben'ny afovoany, ½ ”- 1 ½” (1.27 - 3.81 cm) dia 30 ka hatramin'ny 60 segondra. Ny tapany 1 ″ (2.54 cm) dia maharitra roa minitra. Ny fametahana dia mety hisy fiantraikany amin'ny halavan'ny fotoana ilaina amin'ny tsingerina. Ho an'ny fotoanan'ny hafanana fohy kokoa dia azo ampiasaina ny famatsiana herinaratra lehibe kokoa.
Ny vokatra / tombony Ny hafanana mazava ho an'ny faritra mila fandrehitra dia mavesatra kokoa sy azo tsoahina kokoa noho ny fanamainana miaraka amin'ny afo.
Sokajy Technologies Tags fanangonana metaly vy, fananganana vy, fanalefahana, induction aegaling, induction metaling metal, induction pipeline fanindronana Post Fikarohana
Inona no fampidinana fanasitranana?